Kukanganisa pakurera katsi kumba | Cherechedzai Makati
Kukanganisa pakurera katsi kumba
Monica sanchez | | Katsi kubereka
Tinoda makati uye tinonamata avo vanogara nesu, asi dzimwe nguva tinoita zvikanganiso zvinogona kudzivirira mhuka kuti ifare. Uye ndezvekuti kwenguva yakareba zvave zvichitendwa kuti vaive vakapusa, vakazvimiririra, vakasurukirwa, kana kuti kunyangwe vakaita chimwe chinhu chakaipa yaive nekuti vaida kugumbura munhu.
Sezvineiwo, zvishoma nezvishoma tiri kuona kuti kune nzira dziri nani dzekuvabata. Zvakadaro, ndinofunga zvichiri kukosha kwazvo kuziva ndezvipi kukanganisa pakurera katsi kumba. Nenzira iyi, iwe unozokwanisa kudzivisa kuzviita.
1 Kumuparadzanisa naamai vake achiri mudiki
2 Usamurega ari katsi
3 Muite munhu
4 Kwete kukupa rubatsiro rwaunoda
5 mumugamuchire pakarepo
Kumuparadzanisa naamai vake achiri mudiki
Ndinoziva. Katsi ibhora rinokosha remvere. Asi kuti "bhora remvere" rinoda amai varo nevanin'ina vavo kwemwedzi miviri yekutanga yehupenyu (uye zvirinani kana iri mitatu). Munguva iyoyo, ichadzidza kuzvibata sekatsi, kutamba, uye kunyange kudya nekunwa kubva kune anodyisa / chinwiwa nekutarisa mubereki wayo.
Kana mukakurumidza kurambana, unogona kupedzisira wava nezvinetso zvemaitiro.. Somuenzaniso, kana tikaenda naye kumba nomwedzi mumwe chete kana kuti isingasviki, haasati achizoziva kuva mhashu nemhaka yokuti anenge asina mumwe munhu wokumudzidzisa. Muchokwadi, imhaka yeichi chikonzero zvinokurudzirwa kutora mukoma nemunin'ina kwete mumwe chete, asi kana vaine mwedzi miviri kana kupfuura.
Kana tasangana a katsi yenherera, chakanakisisa chingava chokutsvaka kumuwanira amai vokurera, asi sezvo ikoku kunowanzova kwakaoma zvikuru, nguva dzose tichava nesarudzo yokutora mumwe kuti tichengetane.
Usamurega ari katsi
Patinoenda naye kumba tinofanira kunyatsojekesa zvaanoda. Ndiko kuti, tinofanira kuziva kuti katsi inokwenya, kuruma, kusvetuka, meows, uye kuti ine hunhu hwayo.. Kukanganisa kukuru kwandiri kuedza kugadzirisa maitiro avo kuti aenderane neadu.
Kana tisingadi kuti aparadze midziyo yacho, somuenzaniso, chatinogona kuita kumupa zvokukwenya kana kuti zvinhu zvaanogona kukwenya. Tinofanira kumupa dzimwe nzira kuitira kuti ave uye akure sezvaari: mhuka. Kwete zvekare hapana zvishoma.
Izvi zvine chekuita nepfundo rakapfuura, asi ngatitaure nezvazvo. Tinoda katsi, uye tinoda kuidzivirira. Paanenge ari mwana wembwa hazvidzivisiki kufunga kuti iye mucheche, ane chiso chake chinotapira uye zviratidzo zvake zvinobata. Uye paanokura, tinoramba tichimuona se "mwana wedu." uye zvakanaka asi inova kukanganisa patinongoipfeka, kana pakarepo patinofunga kuti inoita chimwe chinhu kuti titsamwise. Iyo feline haidi zvipfeko (kunze kwekunge iri katsi isina mvere inogara munzvimbo inotonhora, hongu).
Kana achitonhorwa, zvakanakisisa zvatingaita kumurega achizevezera pedyo nesu, kana kurara pasi pemavharo. Asi kuipfekedza hakuna musoro, nekuti kuchaita kuti unzwe kusagadzikana. Ukuwo, katsi haigoni kuita zvinhu zvinotikuvadza. Kana, somuenzaniso, akaita weti pamubhedha, kana kuti akatiruma, musengwa wedu kuziva chikonzero nei. El kushungurudzika, kufunganya, uye kuora mwoyo, ndizvowo zvakaita katsi, kunyanya dziya dzinogara munzvimbo dzisingapiwi rubatsiro rwadzinoda.
Kwete kukupa rubatsiro rwaunoda
Kubva panguva yekutanga yatinokugamuchira, takazvipira kukuchengeta muhupenyu hwako hwese. Izvi zvinoreva kuti tinofanira kumuendesa kun’anga nguva dzose pazvinenge zvakakodzera kumubaya jekiseni, kumubvisa honye, ​​kumutema uye pese patinofungira kuti ari kurwara kana kuti pane chiri kurwadza. Pamusoro pezvo, tinofanira kumupa chikafu chekatsi chemhando yepamusoro, pamwe nekumupa mvura yakachena zuva nezuva. Asi izvi hazvisi zvose.
Katsi inofara haingodi kuti zvidikanwi zvavo zvenyama zvizadziswe, asiwo pfungwa dzavo. uye nokuda kwaizvozvo Tinofanira kupedza nguva tichimuziva. kuziva nguva uye sei anoda kubatwa, chii chitoyi chake chaanofarira, kupi uye naani waanoda kurara ... Zvose izvi zvichange zvichibatsira zvikuru kuvaka hukama hwakanaka uye hunokosha nemudiwa wedu feline.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, chikanganiso chakakomba ndechekuti isu tinogamuchira katsi pakuda. »Mwanakomana wangu anoda imwe», »Ndinoda kuva neimwe yerudzi urwu», »Ndiri kuzopa hanzvadzi yangu yekuzvarwa kwake»,... Chokwadi zvimwe zveizvi zvinonzwika zvakajairika kwauri. Zvinosuwisa zvikuru, asi mazhinji aya "katsi dzezvipo" kana "whim katsi" dzinopedzisira dzave mumugwagwa pakarepo padzinenge dzisisatapira mabhora emvere.
Zvakanaka kana iwe uchipa kune mumwe munhu waunoziva kuti achaitarisira uye kunetseka pamusoro payo kwehupenyu hwayo hwese, asi ngatidzivise izvi. Ngatiregei kuraswa kwemhuka. Kana iwe uchida kugara nehadzi, tanga wayera zvakanakira nezvayakaipira, nekuti zvinosanganisira basa uye kuzvipira kunoshandura hupenyu hwako.. Ndinongovimba kuti zviri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Katsi kubereka » Kukanganisa pakurera katsi kumba
Zvese zvekitsi yako
Chengetedza kati yako sezvaanofanirwa nemazano aya atinoita uye aachada. Uye zvakare, iwe unogona kutora mukana weimwe yeanopa ayo aripo izvozvi:
Chii chinonzi feral cats?
Nei tichida katsi
Tora zvinyorwa zvazvino pamusoro pemakati.